Ilebhu yezimbiwa ezityiwa umlilo ngodongwe crucible
30g 40g 45g 50g 65g
Yiba nokumelana okuphezulu kunesiqhelo kokuqhekeka phantsi kweemeko zovavanyo lomlilo. Iikhreyibhile zethu kunye neemveliso ezichasayo zisetyenziswa kwiilebhu kuyo yonke imarike yamazwe ngamazwe. Sineentlobo ngeentlobo zeemilo kunye nobukhulu obukhoyo ukukhawulelana neenkcukacha ezifunekayo.
I-Fire Assay Ubungakanani beCrucible: 5g/20g/30g/40g/45g/50g/55g/65g/75g kunye No.8/No.8.5/No.9/No.9G/No.9.5 crucibles are avavalbe kwaye nathi senza ubungakanani obulungiselelweyo.
Iisampulu zasimahla ziyafumaneka kuvavanyo.
Iisampulu ze-drill core (okanye ezinye) zifunyenwe kwilabhoratri, zityunyuziwe, zigaywe kwaye zomiswe kwi-oven. Iisampulu ziyohlulwa zibe ziingxowa, ziphawulwe kwaye zilinganiswe.
Emva koko, iisampuli zilungiselelwe inkqubo yokudibanisa, efuna indawo yokunciphisa kwaye ngoko iisampuli zixutywe kunye ne-flux, umthombo wekhabhoni (uthuli lwamalahle) kunye ne-litharge (PbO).
Iisampulu emva koko zifakwe kwi-fusion / refractory crucible, ilungele ukungena kwiziko. Ubushushu obuphezulu (1000 - 1200 ° C) bunyibilikisa isampuli ngelixa i-flux idibanisa ne-ganggue (izinto ezingenaxabiso) kwaye i-lead ekhoyo ngoku iqokelela zonke iintsimbi ezixabisekileyo. I-concoction ye-Pb-Au-Ag-PGE esanda kwakhiwa ifudukela ezantsi kwi-crucible ngenxa yobuninzi bayo.
Njengoko isampula ilothe epholileyo iphinda ihlulwe kwinkunkuma yeglasi (slag) ngehamile, kwaye ifakwe kwi-crucible bone ash (MgO) kwi-crucible, ilungele inyathelo le-cupellation.
Isampulu emva koko ibekwe kwiziko lomlilo elimalunga ne-1000°C. I-oxidise ehamba phambili ngoncedo lomoya ongenayo ovela kwi-furnace muffle kwaye ngoko nangoko iyanyibilika kwaye ifakwe kwi-crucible, ishiya into eyaziwa ngokuba yi-prill metal exabisekileyo.
Iprill ke ihlalutyelwe isiqulatho sayo sentsimbi exabisekileyo ngokuyinyibilikisa kwi-aqua regia (umxube we-hydrochloric kunye ne-nitric acid) kunye nogxininiso olugqitywe ngeendlela ze-spectroscopic (AAS, ICPAES, ICPMS).
Imida yokuchongwa ekugqibeleni ikummandla wamacandelo kwibhiliyoni nganye kodwa ukuchaneka kuqhelekile ukuba kwingingqi ye-3 -5% kobu buchule bohlalutyo lwetsimbi.
lab consumables crucible I-mineral fire clay crucible